Chikunguru 13, 2018 arun
OKCoin Exchange anotangazve Fiat kuti crypto wokuita zvemusika US
Cryptocurrency Exchange OKCoin akaita yakatanga bazi iri US pamusika chipiriso zvokutengeserana mabasa pakati US madhora uye cryptocurrencies zvikuru akawanda.
Nokuti nhungirwa itsva, Kambani nyaya bhizimisi mari basa (MSB) kunyoresa pamwe US ​​Financial Mhosva ånd Network (FinCEN) muna November 2017.
zvisinei, OKCoin inoti website yayo kuti Fiat-kuti-crypto zvokutengeserana basa iri parizvino chete makambani ari California.
The Fujitsu basa achasarudza kana wako blockchain chirongwa chiri kubudirira – zvose zviri chete 5 mazuva
Kutanga kutengeserana rekodhi blockchain zvirongwa inofanira kuti kazhinji anotora nguva refu. zvisinei, Fujitsu wakatanga kurwisa chikuva itsva inoita makambani kuona kana ledger kwavo zvakaparadzira zvirongwa achanunura yezvokutengeserana zvikomborero mumazuva mashanu.
Zvinorondedzerwa somunhu “zvikuru kutsanya blockchain chigadzirwa yemibvunzo vatengi kutsvaka kana yokuchenesa digitaalinen kushanduka zvirongwa kwakavakirwa vakagovera ledger michina,” kuchikuva kunoderedza nguva uye mutengo zvose kukura itsva Optimization kuti aripo blockchain muzvirongwa.
Uchapupu bhizimisi framework chinotanga-vhiki imwe kubvunza, panguva iyo Fujitsu chinopa uchapupu dzebhizimisi kuvhiyiwa vasati kutamira kune uchapupu pfungwa.
Maererano Fujitsu, basa chakagadzirirwa kuziva uye kubvisa rakajairika zvipingamupinyi kuti vabudirire blockchain kukura uye Implementation vasati kuva dambudziko. Frederick Breuck, Musoro Blockchain Innovation pa Fujitsu, akati kuti dzakati itsva aizorega makambani kuva zvarisingazivi mubasa ravo pamwe Blockchain.
“Blockchain nemamwe DLTs zvinogona kuchinja mabhizimisi uye maindasitiri ose, uye, rakafuridzirwa vafarire makasitoma edu, hwatakatanga ichi akagadzirira-to-vanoenda pasuru kuti kwete chete kutyaira vatengi’ blockchain kuedza, asi Kudzokorora uye kuvandudza huripo zvirongwa, uye tingatarisira kupima ichi kuva zvakananga kukanganisa yose EMEA nharaunda kuti vawane blockchains dzingangoitika zvebhizimisi kushandisa nyaya, “Vakati Breuck.
Fujitsu ndeimwe yenzvimbo proactive Michina makambani ari blockchain uye vakagovera ledger michina.
The kambani kare rinonyomba pamusoro 50 Blockchain patents uye ane simba nhengo Hyperledger rakapiwa, pachena bhuku chirongwa Kunoumbwa pamusoro 100 Makambani kushanda pamwe chete kuti vave zvakafanana nemitemo kuti vezvokutengeserana blockchain mararamiro.
The kambani anotarisira mberi kusimbisa basa raro upgrading Kuparadzirwa Ledger michina pamwe kushanda kwayo azvino zvebhizimisi blockchain nechipiriso.
Maererano Fujitsu, ari “chirongwa chigadzirwa nokukurumidza Implementation-zuva shanu” inotanga pa 9900 euros, riri pamusoro 11,600 madhora.
Kraken Daily Market Mushumo 12.07.2018
$89.7M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Chikunguru 21, 2018 pa 4:18 PM
Tom Lee on $25k BTC Prediction, New Opera Wallet – Yanhasi Crypto News
Will Litecoin 100x…AGAIN? Watch this video on YouTube Related posts:Taiwan’s central bank
altcoin AltCoin Buzz altcoins bitcoin bitcoin 2018 bitcoin analysis bitcoin bottom Bitcoin crash bitcoin crash over bitcoin crash over 2018 bitcoin nhau bitcoin news today Bitcoin price bitcoin price 2018 bitcoin price growth bitcoin price news bitcoin price rise bitcoin technical analysis bitcoin today misa cheni BTC btc news btc today cardano crypto cryptocurrencies cryptocurrency cryptocurrency market cryptocurrency news cryptocurrency trading crypto news eos ethereum ethereum news ethereum price Exchange bhizimisi is bitcoin done crashing litecoin nhau dandara ripple wokutengesera when to buy bitcoin xrp